I-China China yenza ubungakanani obahlukeneyo wentambo ye-hex intloko yomhlaba wekhonkrithi i-anchor bolt yoMvelisi kunye neFektri | Ubulumko
Ukuqinisa iinxalenye ezidibanisa ezimbini ngemingxunya.
Okwesibini, ukusetyenziswa kweebhanti ze-flange ezinamacala
Intloko yebholiti ye-flange ene-hexagonal ineendawo ezimbini: intloko enamacala kunye nomphezulu we-flange. "Indawo yokuxhasa uxinzelelo lwendawo" yayo inkulu kunezo ziqhelekileyo iibholiti zentloko, ngoko ke olu hlobo lwe-bolt lunokumelana namandla angaphambi kokuqiniswa kunye nokuthintela ukusebenza okuluhlaza nakho kulungile, ke isetyenziswa kakhulu kwiinjini zemoto, zinzima oomatshini kunye nezinye iimveliso. I-Hexagon intloko iibholiti ezinemingxunya kunye neendawo zokubeka entloko. Xa zisetyenzisiwe, iibholiti zinokutshixwa ngomatshini ukuthintela ukukhululeka.
Isithathu, ulwahlulo esisiseko iibholiti esisangqa
1. I-Hexagon intloko ye-screw bolt enemingxunya
Umngxunya wepini owahluliweyo wenziwe kwisikrufu ukuze udlule kumngxunya wentsimbi, othululweyo ngoomatshini, kunye nokukhulula kunokuthenjwa
2. Intloko yeheksagoni eneebholithi
Iibholiti ezinemingxunya enamakhonkco inokulungisa ngokuchanekileyo indawo yokuma kwamalungu axhunyiwe, kwaye inokumelana nokucheba kunye nokukhutshelwa kwicala elinqamlezileyo
3. umnqamlezo ihexagon eneentloko ezingaphezulu
Kulula ukuyifaka kwaye uyiqinise, ikakhulu isetyenziselwa ishishini elikhanyayo, isixhobo kunye nemitha enomthwalo omncinci
4. isikwere intloko evulwa
Intloko yesikwere inobungakanani obukhulu kunye nomgangatho omkhulu wokuthwala, ekulungele ukuba isikrufu sidibanise intloko okanye sixhomekeke kwezinye iindawo ukuthintela ukujikeleza. Ingasetyenziselwa kwiindawo ezine-T-slots ukulungelelanisa indawo ye-bolt. Iibholiti zentloko yesikwere C zihlala zisetyenziswa kwizakhiwo ezirhabaxa
5. iibholiti ezibaliweyo
Intamo yesikwere okanye i-tenon inomsebenzi wokumisa ukujikeleza, kwaye isetyenziswa kakhulu kwiimeko apho umphezulu weendawo ezixhunyiwe kufuneka ubethe tyaba okanye ugudile.
6. T-slot evulwa
I-T-slot bolts zilungele iimeko apho iibholiti zinokudityaniswa kuphela kwelinye icala lamalungu axhunyiwe. Emva kokuba i-bolt ifakwe kwi-T-slot kwaye ijikeleze i-90 degrees, i-bolt ayinakukhutshwa; inokusetyenziswa nakwimeko apho ulwakhiwo ludinga ukudityaniswa.
7. Iibholiti ze-anchor zisetyenziselwa ngokukodwa iziseko zekhonkrithi esele zingcwatyiwe ukulungisa iziseko zoomatshini nezixhobo.
Zisetyenziselwa iindawo kunye nezixhobo ezifuna ukunqunyulwa rhoqo.
8. Iibholiti ezinamandla aphezulu kumalungu aluhlaza angqingqwa esakhelo segridi engqongqo
Amandla aphakamileyo, asetyenziselwa ikakhulu uhola wendlela kunye nomgaqo kaloliwe, izakhiwo zorhwebo nezoluntu, iinqaba, iikhreyithi.
Ulwahlulo olusisiseko lweebholtshi ezintsha ezinamacala amathandathu zichazwe apha ngasentla. Oku kwenziwa ngokungqinelana neemfuno zentengiso yakutshanje kwaye zinemeko yazo ethile yokusetyenziswa. Umzekelo, i-T-slot bolts inokudityaniswa kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo. Kwangelo xesha, la malungu kunye namacandelo anokusetyenziswa njengezimeleyo, njengecandelo ngalinye okanye uqhagamshelo kuloliwe, onokuthi ususwe ngokukhululekileyo, ukuthintela amaqhina afileyo kunxibelelwano kwaye uchaphazele ukugcinwa kunye nokusebenza kwexesha elizayo. Isetyenziswa ngokubanzi kunxibelelwano kwindawo enobumbano yomzi mveliso.
Egqithileyo imichiza i-anchor bolt
Okulandelayo: I-304 316 ye-Stainless Wedge Anchor Ukwandiswa kweBolts ngexabiso elifanelekileyo
I-Bolt Screw Anchor
Isikhonkwane seBlue sekhonkrithi
Ikhonkrithi yeBlue Screw Anchor
I-Screw Anchor Bolts
I-M10 I-Screw Anchor Bolts
Ukwanda 304 316 Stainless Wedge Anchor Ukwandiswa ...